အိုဘားမား ခရီးစဉ် အောင်ပွဲခံဖို့ မဟုတ် | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| November 16, 2012 | Hits:84
16 | | အိုဘားမားဟာ စနေနေ့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်မှာ ဖြစ်ပြီး တနင်္လာနေ့မှာ မြန်မာ၊ အင်္ဂါနေ့မှာ ကမ်ဘောဒီးယား နိုင်ငံတို့ကို ခရီးဆက်ပါမယ် (ဓာတ်ပုံ- Reuters)
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘာမားရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်ဟာ “အောင်ပွဲခံ”ဖို့ မဟုတ်ဘူးလို့ ဝါရှင်တန်က အိမ်ဖြူတော် အရာရှိတွေက ကြာသပတေးနေ့မှာ ပြောဆိုိလိုက်ပါတယ်။
အိမ်ဖြူတော် အရာရှိတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးပေါ် လုပ်ဆောင်စရာတွေ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်ပေးဖို့နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မွတ်စလင်းတွေကြား တင်းမာမှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းဖို့လိုနေတယ် လို့ ပြောပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာ ကချင် အဖွဲ့ ၃၄ ဖွဲ့ စုစည်းထားသည့် ကချင် မဟာမိတ်အဖွဲ့ (Kachin Alliance) က သမ္မတ အိုဘားမား ခရီးစဉ်ဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ဆက်လုပ်နေတဲ့ မြန်မာအစိုးရကို အသိအမှတ်ပြုရာရောက်ပြီး ရွာပုန်းရွာရှောင် ဒုက္ခသည်များအရေးနဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အခန်းကဏ္ဍကို လျော့ကျစေနိုင်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများအရေး မှေးမှိန်စေနိုင်တယ်လို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ပို့ထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သမ္မတ အိုဘာမားရဲ့ မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေ အပေါ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တောင်းဆိုချက်တွေဟာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်း အလဲတွေ ပိုဖြစ်လာဖို့ အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ အိုဘားမားရဲ့ အာရှရေးရာ ထိပ်တန်းအကြံပေး ဒန်နီရပ်ဆဲလ်က ဆိုပါတယ်။
“မြန်မာ ခေါင်းဆောင်တွေ လမ်းမှန်ပေါ် ခြေချနိုင်ခဲ့ပြီလို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချိန် ရောက်ပါပြီ။ သူတို့ ရှေ့ဆက်လှမ်းနိုင်ရေး တိုက်တွန်းဖို့ အချိန်ကို လက်မလွှတ်သင့်ဘူးလို့ ကျနော်တို့ အရေးတကြီး ထင်မြင်ယူဆပါတယ်” လို့ မစ္စတာ ဒန်နီရပ်ဆဲလ်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘာမားဟာ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့ မှာ ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီး ၆ နာရီကြာ နေမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖနွမ်းပင်မှာ အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးကို သတင်းယူဖို့ ရောက်နေတဲ့ သတင်းထောက်တွေဆီ ပေါက်ကြားလာတဲ့ သတင်းအရ အိုဘားမားဟာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်အဆောက်အဦမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့မယ်၊ ပြီးရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ် သွားမယ်၊ နောက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမကို သွားပြီး ဖိတ်ကြားခံထားရတဲ့ လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ မိန့်ခွန်းပြောမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အာဆီယံအစည်းအဝေး တက်မယ့် မြန်မာသမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နိုဝင်ဘာ ၁၉ မှာ ရန်ကုန် ခဏ ပြန်ပြေးပြီး အမေရိကန် သမ္မတနဲ့ တွေ့မယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ယနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်စွဲနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သမ္မတရုံးအင်တာနက်စာမျက်နှာ မှာ ဖော်ပြရာမှာတော့ “သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ” အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို “အလုပ်သဘောခရီး လာရောက် လည်ပတ်”မှာလို့ ဖော်ပြပေမယ့် ဘယ်လိုအလုပ်သဘောလဲဆိုတာ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းထားခြင်း မရှိပါဘူး။
အိုဘားမားဟာ မနက်ဖြန် စနေနေ့မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ကို ဆိုက်ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး တနင်္လာနေ့မှာ မြန်မာ၊ အင်္ဂါနေ့မှာ ကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့ကို ခရီးဆက်ပါမယ်။
သမ္မတ အိုဘားမား ခရီးစဉ်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment kyaw moe November 16, 2012 - 7:18 pm	မြန်မာနိုင်ငံမှ ကချင်ပြည်သူတွေ ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက လှူတန်းနေပါတယ်
Reply	Ven. Pandita November 16, 2012 - 11:33 pm	“အလုပ်သဘောခရီးစဉ်” ဆိုတာ business trip ကို မြန်မာပြန်ထားပုံရပါတယ်။ business trip ဆိုတာ official trip နဲ့အဓိပ္ပါယ်အတူတူပါပဲ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အလည်အပတ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ တာဝန်အရ တရားဝင်လာရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။
Reply	MTK November 17, 2012 - 6:26 am	Shameful job! The abandon city of Yangon and our Historical University of Rangoon campus are now cleaning, painting and decor right now for President Obama next week visit. All are joking and only good showing, after President Obama returned, there were going to beaghost city and ghost University of Rangoon then nobody take care. This trip is for our people hopes and wishes going forward Democracy and Human Rights. Really Warmly Welcomed andalot of hopes and dreams coming true for 50 millions Burmese People living in poverty.
Reply	thein min han November 18, 2012 - 5:59 pm	burmese people havealot of experience like un officials and us officers take the bribes from junta and they accepted what the junta did and burmes junta power long-lasting forever until now … Obama can resist or is he the like the other ones ? why he so that much care about thein and shwe man … ? did he need sth from them ? we all must die .. our life is in ur hand mr obama .. have mercy on us …!!!